トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Noma ukufakwa amamodeli we pachinko emakhazeni ngokuvamile Xintai, noma ngokuvamile sisetshenziswa ithebula
Lilonke kukhona okuningi sasemakhazeni pachinko, kodwa Xintai nezitolo ezitolo futhi esetshenziswa etafuleni eliphakathi nendawo uphakathi nendawo, kukhona ezihlukahlukene pachinko eshintsha. I izici imishini emisha ngokuvamile sasemakhazeni pachinko, etholakala indawo lula amakhasimende bahlangana, uke wazibuza yona Kuyaphawuleka eduze ukuncintisana esitolo eziningi lokho. Xintai, ngoba kungase kuthathe izindleko omkhulu, futhi ezifana yokuthengisa inzalo enkulu akuyona ngezinga elithile kuvikelwe, uba nzima impela. Uma ufuna ukwethula
Xintai izinto eziningi ezinkulu, kuyinto Xintai izinsuku eziningana isingeniso, kulapho ukuthi kweminye imihlobo Xintai ungaphakathi umshini yokutakula. Leli phuzu, mina kusimo Xintai ngokuvamile kuba emakhazeni pachinko. Xintai e wamakhaza pachinko isikhungo, uma ufuna ukudlala ngaphandle Xintai, ngicabanga ukuthi kungcono ukuya ukudlala isikhathi ukuthi ngemva kwezinsuku ezimbalwa kusukela esethulweni Xintai.
Sekukonke, Xintai ngokuvamile ezimkhanukelayo, isitolo ephezulu yethulwa kuleli esifundeni Qaphela! ?
Empeleni, uma ufuna phezulu isingeniso Xintai esifundeni, uma uze ukwazi hit kuphela esitolo the Xintai, kukhona izitolo abaningi bacabanga ukuthi asikho isidingo ukukhulula uhlupho yokubhadala. Nokho, isikhathi eside isikhathi amamodeli ethandwa, uma ufuna ukuba ukhule imodeli main-uphawu esitolo, ungase uthande ukuvula. Le ndawo, isesikhathini umbono zokuphatha.
futhi, njengoba izici yesikhulumi esetshenziswa ngokuvamile sasemakhazeni pachinko, kunethemba elincane kungenzeka futhi eduze ukuncintisana lesitolo esitolo suburban, ngicabanga ukuthi kuyinto enkulu ikhasimende base is isikhungo njalo. Ngafaka eningi platform esetshenziswa, pachinko yaba base ikhasimende kuqhathaniswa ungqimba yobudala itholakala mkhuba okusezingeni eliphezulu. Xintai kwakamuva okungukuthi, uhlobo impi futhi latency ematfuba ukushintshashintsha, njll, ngoba kukhona onobuhle eziningi eziyinkimbinkimbi, kuyofika ayokwelusa kumelwe kugwenywe. Uma
itafula esetshenziswa, ezifana Xintai futhi kwamukelwa yikhasimende base ekuzigwemeni, wukuthi cishe nawo azokhuphuka e yokuthengisa. Uma lokho kwenzeka, asinasizathu ukuphoqelela ukwethulwa imishini emisha. Emadolobheni asemaphethelweni pachinko eshintsha, ikakhulukazi ngaphandle kwezinto eziningi amakhasimende ukugeleza, ukwandisa yokuthengisa, kunzima ngaphezu phambi esitolo esiteshini. Kuleso simo, wasebenzisa block, Xintai izindleko futhi eshibhile kuqhathaniswa, hhayi lapho nokuvulwa izindleko futhi kalula Cormorant uyophinde abe into. Njengoba
Xintai ngibek? eziningi, ngoba yokutakula hhayi kuphela ukubeka ezinzima Toka esetshenziswa ukuma, akukho yokuthi kwemali ngeke ezinzima. Zonke kunqunywa indawo pachinko esitolo futhi kwamakhasimende base futhi yayo yemigomo izitolo yokuthengisa. Phakathi, kodwa kungase futhi kube khona sasemakhazeni pachinko severe kwemali, pachinko enjalo yaba ukuthi, ngicabanga ukuthi ngokushesha nje ukuzimisela kungenzeka uma ubheka isimo wenkokhelo nail ukulungiswa.
ngu abacindezela izindleko sokuqala nge itafula esetshenziswa, ezifana esitolo kwenqubomgomo lokwehliswa inkokhelo kuze Ezivamile, nezinqubomgomo zokuphatha kungaba ngcono ukuba acabange ukuthi kukhona kuphela isibalo Pachinkoya.
futhi ikakhulukazi Ephakathi ume Xintai, pachinko eshintsha ukuthi musa ukukhiqiza ibhola ukwethulwa ngosuku lokuqala, ngicabanga ukuthi imodi alulame bangase bacabange ukuthi esitolo eqinile. Bheka ngokwesilinganiso, owethulwa ngosuku lokuqala ezifana Xintai is, esitolo kakhulu kokuqina izinzipho for Barker iyona kancane. Pachinko esitolo yiluphi uhlobo noma pachinko emakhazeni into ukuya nawe, sicela uzame ukuhlola.